Zlatan Ibrahimovic Goormee ayuu ku soo laaban doonaa Garoomada? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Zlatan Ibrahimovic Goormee ayuu ku soo laaban doonaa Garoomada?
(16-9-2017) Weeraryahanka kooxda kubada Cagta Manchester United Zlatan Ibrahimovic oo ka soo kabanaya dhaawac daran oo qaliin looga Sameeyey ayaa lasheegayaa in uu kujiro diyaar garoowgii uu Garoomada ugu soo laaban lahaa isaga oo qaata Tababar adag.
Zlatan Ibrahimovic oo dhawaan 1 Sano oo heshiis ah lagalay Manchester United ayaa lasheegayaa in uu Horaanta bisha November. ku soo laaban doono Garoomada isla Markaana uu u Cayaari doono kooxdiisa kulankiisa koowaad ee Xiligaan.
Xiddigaan ayaa sheegay in uu ka fiicnaan doono Xiligii la soo dhaafay isla Markaana uu ka Caawin doono kooxdiisa ku Guuleysiga koobabka muhiimka ah ee ay dheelayaan Xiligaan Waxaana uu daawan doonaa kulanka Axada ay lacayaari doonaan Everton isaga oo sidoo kale amaanay Macalinkiisa Jose Mourinho oo uu sheegay in uu yahay Macalinka ugu fiican Caalamka oo dhan.